टिकटक बनाउने क्रममा बेपत्ता भएकी बेहुली , तर भिडियो हेर्दा जानी जानी गरे जस्तो ( भिडियो ) – Paluwa Khabar
भाद्र ३०, २०७८ बुधबार 30
टिकटक बनाउने क्रममा तनहुँको शुक्लागण्डकीस्थित सेती नदिमा खसेर युवती बेपत्ता भएकी छिन् । वडा नं. ४ र ८ को सिमास्थित रकगार्डेन क्षेत्रमा तस्बिर खिच्ने र टिकटिक बनाउने क्रममा वडा नं. ८ की १९ वर्षिय पवित्रा लम्साल खसेर बेपत्ता भएकी इलाका प्रहरी कार्यालय बेलचौताराका प्रमुख प्रहरी ज्ञान बहादुर खड्काले जानकारी दिए ।
३ जना साथीहरुसँग मिलेर उनीहरु सेतीको किनार रकगार्डेन गएका थिए । पक्की पुल र झलुङ्गे पुलकोबीचबाट ती युवत्ती खसेर बेपत्ता भएको उनले जानकारी दिए । बेपत्ता पवित्राको केहिदिनअघि मात्र विवाह भएको बताइएको छ । साथी खसेपछि उनीहरु आत्तिएर माथि आएछन, प्रहरी निरिक्षक खड्काले भने, पछि वडा अध्यक्षले हामीलाई जानकारी गराएपछि घट्नाबारे थाहा भएको हो । उनका अनुसार दिउँसो २ बजे घट्नाबारे जानकारी आएको हो । जानकारी लगत्तै प्रहरीले सेती नदि छेउछाउमा खोजी कार्य जारी राखेको प्रहरी निरिक्षक खड्काले बताए । उनका अनुसार भिमाद क्षेत्रमा पनि प्रहरीलाई परिचालन गरिएको छ ।
निर्देशक सुदर्शन थापाले केही दिन अगाडि मात्र समाचारवाचिका सुप्रिया कटुवालसँग इन्गेजमेन्ट गरे । सुदर्शनको इन्गेजमेन्टमा उनको नजिकको साथी पूजा शर्मा उपस्थित नहुँदा चलचित्र वृत्तदेखि दर्शकमा विभिन्न खालका आशंका उत्पन्न भयो । अब, सुदर्शन र पूजाविचको सहकार्य जारी रहन्छ कि रहदैन भन्ने खालका प्रश्न समेत उठे ।
पूजाले अगाडि भनिन्–‘भोली म पनि बिहे गरेर जान्छु होला । त्यो बेलामा पनि म सुदर्शनलाई चलचित्रमा मलाई नै राख्नुहोस् भनेर भन्दिनँ । मैले पहिलेदेखि नै स्टोरीमा नमिलेको खण्डमा आफूलाई नराख्न सुदर्शनलाई आग्रह गरेको थिएँ । म यस्तो गीत गाउँछुमा मैले नै अर्की नायिकालाई अफर गरेको थिएँ । हाम्रो चलचित्रमा म नै हुनुपर्छ भन्ने छैन ।’
तर, नायिका पूजा शर्माले भने सुदर्शनले बिहे गर्दैमा एकसाथ कामै गर्दैनन् कि भनेर नसोच्न सबैसँग आग्रह गरेकी छिन् । पूजाले भनिन्–‘हामी नै सुदर्शन थापाको बिहे होस् भनेर चाहने व्यक्ति हो । उहाँको जीवन कसैको साथमा अगाडि बढोस् भनेर सोच्ने अनी बिहे गरेपछि मलाई चलचित्रमा नै लिदैन कि भनेर सोच्नु स्वार्थीपना हो । बिहे गर्दैमा टिमअप छुट्ने होइन ।’ सुदर्शन थापाले बिहे गर्दैमा एकसाथ कामै नगर्ने भन्ने हुन्छ र ? उनले प्रश्न गरेकी छिन्।
Prevकञ्चनपुरमा एम्बुलेन्सले ठ’क्कर दिँदा साइकल यात्री ४५ वर्षीय कृष्णबहादुरको मृ’त्यु’
Next२ दिनकी सुत्केरीको यस्तो बि जोग,बुढी आमाको यस्तो छ हाल (भिडियो हेर्नुस्).
वैशाखमा बिहे गर्नेले धेरै जन्ती लान नपाइने , सरकारले ल्यायो यस्तो नियम (तोक्यो संख्या)